Amagqabantshintshi kwimbali yaseNorway | Ukuhamba kwe-Absolut
Amagqabantshintshi kwimbali yaseNorway
Ngokusesikweni Imbali yaseNorway Iqala ngo-872 AD, unyaka wokusekwa kobukumkani. Nangona kunjalo, imbali yayo ibuyela umva kakhulu ngexesha, ukusuka kwi-Prehistory ukuza kuthi ga namhlanje.
Kule posi siza kuvavanya awona maxesha abalulekileyo kunye neziganeko kwimbali yeli lizwe laseScandinavia.
1 Isiseko soBukumkani baseNorway (872)
2 Umanyano lweKalmar (1389)
3 Ubusuku beminyaka engama-400
4 Inkululeko yaseNorway (1905)
5 ENorway ngexesha leMfazwe yesibini (II) ngo-1940 ukuya ku-45.
6 ENorway namhlanje
Isiseko soBukumkani baseNorway (872)
Ngenkulungwane ye-XNUMX AD abantu ababehlala kwiPeninsula yaseScandinavia babesele bebonakalisile ukuba ngamagorha anobukroti kunye noomatiloshe abaziingcali, ngaloo ndlela beqala ixesha lexesha Uhlaselo lweViking.
IiVikings (okanye amaNorman) zisasaza uloyiko kunxweme lwayo yonke iYurophu, ukusuka kwiiBritish Isles ukuya kwiMeditera, zada zaya nakumbindi weRussia. Nangona kunjalo, kwimimandla yabo yemvelaphi bahlulahlulwe kwaye ngokuqhubekayo babephikisana.
Sverd i Fjell, "Amakrele asentabeni". Isikhumbuzo esikhumbuza iMfazwe yaseHafrsfjord kunye nokuzalwa koBukumkani baseNorway.
Yonke into itshintshile enkosi kumfanekiso we UHarald I waseNorway, ekwabizwa ngokuba ngu "Harald the Fair" okanye "Harald the Blond." Le nkokeli yeViking yaqala uthotho lweemfazwe kunye neentsapho ezingabamelwane. Emva kokuphumelela kwenqanawa yomkhosi kwi idabi lehafrsfjord Ngo-872, waseka ifayile ye- Ubukumkani benorway, eyathi yandiswa ngakumbi nangaphantsi ngemimandla yangoku esemazantsi eNorway naseSweden.
Umanyano lweKalmar (1389)
La Umanyano lweKalmar yayingumzuzu wobukhazikhazi obuphezulu bezikumkani zaseScandinavia.
UMargaritaIntombi kaKumkani waseSweden, waba nguKumkanikazi waseNorway ngo-1372 emva kokubhubha komyeni wakhe, uKing Haakon VI, kunye noKumkanikazi waseDenmark emva kokubhubha kwonyana wakhe u-Olaf, indlalifa efanelekileyo etroneni. Emva kokudibanisa izithsaba ezibini phantsi kwegunya lakhe, akazange athandabuze ukubanga amalungelo akhe kwitrone yaseSweden. Abaxhasi bakhe kwafuneka bajongane nomkhosi nabalandeli bomnye umntu owayefuna ukubekwa etroneni, uAlbert waseMecklenburg, lowo woyisileyo idabi lokunye (1389).
Imephu yemimandla elawulwa yi-Kalmar Union
Umanyano lwezi zikumkani zithathu zambatha imizimba yazo ngokusayina i Umanyano lweKalmar. Urhulumente omtsha wamanyanisa lonke ilizwe laseScandinavia: iSweden, iNorway, iFinland, iDenmark, i-Iceland kunye neFaroe Islands.
Ubusuku beminyaka engama-400
ISweden iyishiyile i-Kalmar Union ngo-1523, nangona iNorway neDenmark zahlala zimanyene kwade kwasekuqaleni kwenkulungwane ye-XNUMX. Nangona kunjalo, kule manyano ENorway kwaye abemi bayo bashiywa bekwimeko yokujongela phantsi vis-à-vis eDenmark. Ngapha koko, ikomkhulu lasekwa eCopenhagen.
Eli xesha lokwehla liqhubeke phantse kangangeenkulungwane ezine, yiyo loo nto yaziwa kwimbali yaseNorway njengo'Busuku beminyaka engama-400 '.
Kwi-1814, emva kweemfazwe zikaNapoleon ezonakalisa ilizwekazi elidala, i Izivumelwano zaseVienna apho iDenmark yaphulukana nolawulo lweNorway. Nangona kunjalo, eli lizwe aliphindanga lazimela, kodwa lagqithela ezandleni zaseSweden.
Inkululeko yaseNorway (1905)
Uvakalelo lwesizwe saseNorway lwaphucuka kancinci kwinkulungwane ye-1905 njengoko ukwaliwa kwesithsaba saseSweden kwakhula. Nangona bekukho iziqendu ezinobundlobongela kunye namaxesha oxinzelelo, ingxaki ayikhange inyuke kwaye yagqitywa ukusonjululwa ngoxolo ngo-XNUMX ngokubanjwa ukuvuma.
Ngale ndlela, abantu baseNorway babekhetha ngokukhululekileyo ikamva labo kunye nokubheja ekusekweni kobukumkani babo. Ukumkani omtsha, IHaakon VII, wanyulwa yiPalamente yaseNorway. Yayikukuzalwa kwelizwe laseNorway langoku, ubukumkani basePalamente kunye nobukumkani obabunenkunzi enkulu e-Oslo.
ENorway ngexesha leMfazwe yesibini (II) ngo-1940 ukuya ku-45.
Ngaphandle kwento yokuba iNorway ibhengeze ukuba lilizwe elingathathi cala ekuqaleni kweMfazwe yesibini (II) ngo-1940 amaNazi eJamani ahlasela ilizwe kunokwenzeka ukuba ekugqibeleni ajoyine iiAllies.
Uhlaselo lwalukhawuleza kakhulu, kuba uncedo oluncinci lomkhosi olufunyanwa ngabaseNorway baseBritane lwalungonelanga. Inkqubo ye- Umsebenzi wasejamani eNorway yahlala de kwango-Meyi ka-1945. Ngeli xesha, kwavela umbutho wokuchasana ngaphakathi, ukhokelwa ngu-King Haakon VII ngokwakhe.
UKumkani Haakon VII nosapho lwakhe ngoSuku lweNkululeko (ngoMeyi 17, 1945).
Emva kwemfazwe, iNorway yaphinda yazimela kwaye yathatha inxaxheba kwezopolitiko zamanye amazwe, isebenzisana ekudalweni kwe-UN kunye nokujoyina i-NATO kwi-1948.
Ubutyebi obufunyenwe ukuxhaphaza ii-hydrocarbon (i-oyile kunye negesi) kuLwandle lwaseNorway nakuLwandle lwaseMantla baguqula kakhulu uqoqosho lwelizwe. Kumashumi ambalwa eminyaka iNorway yaya ekubeni noqoqosho olulinganiselweyo olusekwe ekulobeni nakwezolimo ukuya ekubeni Elinye lawona mazwe achumileyo eYurophu.
INorway iphuhlise inkqubo yezopolitiko neyentlalo enconywa phantse lilizwe ngalinye emhlabeni. Umzekelo wokuba kunokwenzeka ukufezekisa iinjongo ezimbini zokuphumelela kwezoqoqosho kunye nobulungisa kwezentlalo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Amagqabantshintshi kwimbali yaseNorway
Isikolo esiphakamileyo saseMexico sitsho
INorway ngunozinti waseArgentina obaleke ejele
Phendula kwi-elite way yesikolo saseMexico
iyunivesithi los angeles california sitsho
INorway, ilizwe leoyile, idume kakhulu ngesikerekhokho esikwiMyuziyam yeOlimpiki yaseThalidomine
Lelona lizwe lityebileyo kwioyile kwindawo ye-1, ilandelwa yiSweden
Phendula kwiYunivesithi yaseLos Angeles California
Imvelaphi yeLa Candelaria, indawo eyimbali yaseBogotá
Yazi umda weThathu: iArgentina, iBrazil kunye neParaguay